အန်းဒရွိုက်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Apps ကပ APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » စကားလုံး
Category: - သမ်မာကမျြး
သမ်မာကမျြး Apps ကပ APK ကို
အင်္ဂလိပ်ကစားထက်ပျော်စရာနဲ့တန်ဖိုးရှိရှိလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလပ်အချိန်ဖြုန်းစရာပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ် စကားလုံး ဂိမ်းများကို။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအားလုံးကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအရမ်းလူကြိုက်များကြသည်။ သူတို့က, ပျော်စရာ, ငါတို့စိတ်ကိုအပန်းဖြေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိသည်။
သူတို့သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနဲ့တူသူတို့ကအစတော်တော်များများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ သငျသညျတခုအယ်ဒီတာ, စာရေးဆရာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသတင်းစာဆရာတွေဟာလျှင်, သင်ကျိန်းသေတစ်ဦးရှိသင့် စကားလုံး သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်း။ ကျနော်တို့မှာဤအမြိုးအစား၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းအချို့ရှိ Apps ကပ APK ကို.
သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သင်ကကူညီပေးဖို့ရှုပ်ထွေးပြီးအသစ်သောစကားလုံးများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသိသိသာသာသင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းအဘို့သင့်ဝေါဟာရကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း, သင်စကားလုံးအသစ်မိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းဤအဂိမ်းများကိုဆော့ကစားရန်သင့်ကလေးတွေကိုအားပေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝေါဟာရကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုသှေးနိုင်ပါတယ်။
အာရုံစူးစိုက်မှု Span တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
သင်, သဲလွန်စ crack ပဟေဠိဖြေရှင်းပေး, ဤဂိမ်းအတွက်မှန်ကန်စွာ brainteasers ဖမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်, စိန်ခေါ်မှုပြင်းထန်သောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို span ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်။ ပိုငျသညျသငျသညျကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပိုကောင်းအဲဒီဂိမ်းကစား။ တိုးမြှင့အခက်အခဲအဆင့်နှင့်အတူ, သငျသညျ ပို. ပင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်အမြဲမှုကြောင့်အလုပ်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်မှအလေးပေးတည်လျှင်, သင်ကျိန်းသေစကားလုံးဂိမ်းများကိုဆော့ကစားသင့်ပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်အပန်းဖြေဖို့စကားလုံး-related ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်။ ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဖိအားသက်သာရာကူညီပေးပါမည်။
အားလုံးအားလုံးအတွက်, သင်သည်သင်၏ခံစားချက်တက်ပေါ့ရန်သင့်အချည်းနှီးသောကာလ၌စကားလုံးဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသနအရသိရသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပျြောရှငျပါစေရနျကြှနျုပျတို့၏ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine များလွှတ်ပေးရန်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ပဟေဠိသငျသညျအတှငျးမှကျေနပ်မှုခံစားရစေသည်စကားလုံးတစ်လုံးဖြေရှင်းရေး။
ဒါကြောင့်ဒီမှာသင်စကားလုံးဂိမ်းများကိုဆော့ကစားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေတချို့ရှိနေပါတယ်။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Apps ကပ APK ကို လက်ျာဘက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းများ Classic နှင့်အတူစကားများ
သူငယ်ချင်းများ2နှင့်အတူစကားများ - အခမဲ့ ...
အဆင့်-3 မှမျက်မှောက်စကားအကြို-K သည်
သမ်မာကမျြးရှာရန်အခမဲ့: အ ...
ဖြည့်ပါ-ins - သမ်မာကမျြး Fit ...
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Connect ကို - နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ...
သမ်မာကမျြး Spark - မတ် ...
သမ်မာကမျြး Crack အခမဲ့